Tsy mandeha amin’ny laoniny… | NewsMada
Tsy mandeha amin’ny laoniny…
Par Taratra sur 22/08/2016
Tsy misy mandeha amin’ny laoniny ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Manomboka any amin’ny fanabezana sy ny fampianarana. Ohatra, ny fanadinana bakalorea, nahitana taranja vitsivitsy tsy tomombana. Nitohy amin’izao famerenana ny fanadinana hidirana ho mpiasan’ny ladoany izao izany. Kitoatoa, tandrametaka, tsy fahaiza-manao, tsy fitandremana, tsy tompon’andraikitra, tandrevaka… Tsy mandeha amin’ ny laoniny…. Vitavita ho azy avokoa izany rehetra izany fa tsy mba nisy fanadihadiana ifotony sy ny antony ary ireo tompon’andraikitra nanao izany. Tahaka izany koa ny mpanao politika. Na ny eo anivon’ny mpitondra na ny mpanohitra, samy tsy misy mandeha amin’ny laoniny avokoa. Raha ny vavabe natao ny faran’ny herinandro teo, tahaka ny tena hanao zavatra ireo mpitarika ny fidinana an-dalambe. Nitsefotra anefa izany… Mbola mpanavao sy tsy manana paikady ? Nilamina ny asabotsy tontolo andro tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey nefa nampanantena fa mbola hiverina ireo mpitarika… Tahaka izany koa ny mpitondra. Resaka sy kabary ary fampanantenana etsy sy eroa. Mbola nampiana aza fa vonona hifampidinika. Tsy araka izany fa manome vahana ny fanaovana bemarenina sy ny fanaovana lainga tsara lahatra tsotra izao. Ny tsy fihainoana ary koa ny tsy firaharahana. Aza gaga isika raha tsy matoky ny mpanao politika sy ny mpanohitra ary ny mpitondra intsony ny vahoaka. Mbola mitombina eto ny nambaran’ny fivondronamben’ny eveka fa mila olom-baovao ny firenena. Tsy mandeha amin’ny laoniny ny raharaha eto matoa tonga amin’izany ny hafatry ny fiangonana.
Etsy andaniny, misy dikany avokoa ireo teny na mivantana na ankolaka ataon’ny vahiny. Na ny mandalo na ireo mipetraka eto. Efa nanomboka azy ilay lehiben’ny ONU, narahin’ny Be kintana ary mbola nohamafisin’ilay iraky ny Sadc farany teo… Azo adika avokoa ireny fa tsy mandeha amin’ny laoniny avokoa ny raharaha eto ka ilaina fifampiresahana…
Manampy ireo ny andavanandron’ny mponina efa tsy mandeha amin’ny tokony ho izy intsony. Anisan’izany ny tsy filaminana sy ny fandriampahalemana, ny tsy fahitana ny marina momba ny resaka halatra lakolosy… tonga hatramin’ny resaka Baiboly… Mampahazo vahana ny honohono izany rehefa tsy misy fanazavana sy famotorana lalina. Ny fanahiana ny fidiran’ny silamo mahery fihetsika. Ny fiverenan’ny adim-poko. Eo koa ny fiakaran’ny vidim-piainana ; ny hiatrehana ny fidiran’ny mpianatra, ny ady tany, ny resaka Soamahamanina, ny fihanaky ny kolikoly manomboka any ambony… Ampahany amin’ireo tsy mandeha amin’ny laoniny eto izany… Tokony haverina amin’ny laoniny !